Iindaba-Isinxibelelanisi seVidiyo yeVidiyo eyabasetyhini 6.35mm yefowuni uJack Socket
Isidibanisi seVidiyo yeVidiyo Umfazi 6.35mm Umnxeba weSokisi
Isidibanisi sefowuni yomsindo (ikwabizwa ngokuba yiFowuni Jack, Audio Jack, i-Headphone Jack okanye iJack plug) lusapho lwezihlanganisi zombane. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa iimpawu zomsindo we-analog. Umgangatho kukuba iplagi (echazwe njengesihlanganisi samadoda) iya kudibanisa nejack (echazwe njengowasetyhini).
I-6.35mm (1⁄4 intshi) Ifowuni yeJack ixhaphakile kwizixhobo zasekhaya nakwizinto ezinobungcali, ngelixa i-3.5mm Jack iphantse yajongwa njengesixhobo esiphathwayo sesandi kunye neefowuni. I-2.5mm Jack ayiqhelekanga, kodwa iyasetyenziswa kwizixhobo zonxibelelwano ezinje ngeefowuni ezingenantambo, iifowuni eziphathwayo, kunye noonomathotholo beendlela ezimbini.
Lianzhan 6.35mm 1″ ″ Ifowuni yeJack, yenziwe ngeplastiki kunye nezinto zentsimbi, ngethoni yesilivere kunye nombala omnyama. Isiphelo esinye kukungena kwezibuko lokudibanisa umgca wamandla okufaka okanye intambo ethambileyo. Kwaye elinye icala licwangciswe kwindawo yokugquma ikhompyuter yokujonga ukusebenza okuqhelekileyo. Isicelo seMedia Player, Izixhobo zeVidiyo eziManyelwayo, izixhobo ze-AV, iMakrofoni, iNcwadi yeNqaku, iNtloko kunye njalo njalo.
Ii-Pls ngobubele zifumana i-6.35mm yeFowuni yeFowuni yeJack yesiDibanisi seBhinqa njengezantsi:
Nawuphi na umbuzo, pls zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile ngokuthe ngqo: lianwoo@cnlianzhan.com